Vanuatu ရှိ IBC ၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း - ဗနူအာတွင် LLC
သင်ဗင်နူတူ၌အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုလျှင်၊
●ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်၊ ဘဏ်အကောင့်၊ ဗာနူတူ
Vanuatu တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Vanuatu တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Vanuatu တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Vanuatu ရှိ Offshore ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Vanuatu ရှိ Offshore Company မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် Vanuatu တွင် Offshore Company များမှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်သည်။
Vanuatu Company Formation ကိုဘယ်လိုကူညီသလဲ။
Million Makers Vanuatu သည်ဖောက်သည်များအား Vanuatu နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံအတွက်အခမဲ့ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာအကြံပေးခြင်းကိုပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Vanuatu ရှိကုန်းတွင်းကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Offshore Locations နှင့် Vanuatu မှ Free Zone ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက် Vanuatu တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။
လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများအားလုံးကိုလက်ခံရရှိသည်နှင့်တပြိုင်နက် Vanuatu အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းလျှောက်လွှာတင်သည်။
Vanuatu တွင်ပါဝင်သောသင်၏ကုမ္ပဏီတွင် Vanuatu တွင်ဘဏ်အကောင့်ရှိပါသလား။ ဒါမှမဟုတ်သင်ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်လိုအပ်ရင်။
Vanuatu တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောသင်၏ကုမ္ပဏီအတွက် Corporate စာရွက်စာတမ်းများပေးပို့ခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ဘဏ်လုပ်ငန်းပစ္စည်းများ (အမိန့်ပေးလျှင်) ။
Vanuatu နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံအတွက်သင်၏တစ်နေရာတည်းတွင်ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်သည်။
Vanuatu အတွက်ဘဏ်အကောင့်၊ Vanuatu အတွက်ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်၊ Vanuatu အတွက် Virtual နံပါတ်၊ Vanuatu အတွက် CRM Solutions၊ Vanuatu အတွက် virtual office၊ Vanuatu အတွက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာအကြံပေးကုမ္ပဏီများနှင့် 109 နိုင်ငံများနှင့်အများကြီးပို။
ယနေ့သင်၏ Vanuatu IBC အမည်ကိုရယူပါ။
သင့်ရဲ့ Vanuatu IBC အမည်ရှာပါ
ဗနူအာသမ္မတနိုင်ငံသည်တောင်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအတွင်းရှိကျွန်းတစ်ကျွန်းဖြစ်သည်။ တောင်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာနှင့်သန္တာပင်လယ်တို့အကြားနိယာမကျွန်း (၁၄) ခုမှ Y ပုံသဏ္chainာန်ရှိသောကွင်းဆက်သည်မီးတောင်အကြောင်းအရင်းနှင့်ပြောင်းလဲနေသောမီးတောင်အနည်းငယ်တည်ရှိရာနေရာဖြစ်သည်။ သက်ရောက်မှုရှိသောပစိဖိတ်နှင့်အင်ဒို - Australianစတြေးလျပြည်မပြားများသည်တုန်ခါမှု၊ ဒီရေလှိုင်းများ၊ တွစ်တာနှင့်မီးတောင်ပေါက်ကွဲခြင်းများကဲ့သို့သောပထဝီဝင်လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်အားလပ်ရက်အပန်းဖြေနေရာများဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ Tanna ကျွန်းရှိ Yasur တောင်သည်ထိထိရောက်ရောက်ရရှိနိုင်သည့်ချော်ရည်များနှင့်အထူးသဖြင့်ညနေခင်းတွင် Vanuatu ၏အားလပ်ရက်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ Vanuatu ရှိသယံဇာတအရင်းအမြစ်များကိုမြေယာထဲသို့ထည့်သွင်းရန်စဉ်းစားနေသည့်အခွင့်အလမ်းတွင်ထိုအချိန်တွင်သူသည်၎င်း၏ပုံမှန်မဟုတ်သောဘဝပုံစံ၊ မောက်မာသော၊ ကြင်နာတတ်သောပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်အလွန်ကောင်းမွန်သောရာသီဥတုတို့ဖြင့်သရုပ်ဖော်ထားသောကမ္ဘာတစ်ခုသို့ ၀ င်ရောက်လိမ့်မည်။
ဗနူတူအစိုးရသည်အကျွမ်းတဝင်မရှိသောထင်မြင်ချက်များကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာတိုးတက်လာစေပြီးမကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့သော Strata Titles အက်ဥပဒေဟုလူသိများသောထုတ်ပြန်ချက်ကမည်သူမဆိုအရင်းအမြစ်များကိုနိုင်ငံတွင်းသို့အကျိုးအမြတ်ပြန်ရောက်ရန်အတွက်သင့်လျော်သောဖြစ်နိုင်ချေကိုထည့်သွင်းရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘုတ်အဖွဲ့၊ အကောက်ခွန်နှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးမှပြဌာန်းထားသောနည်းစနစ်များကိုဥပဒေပြုလွှတ်တော်ကထပ်မံစီစဉ်ခဲ့သည်။
Vanuatu ရှိစွန့်စားခန်းများအိမ်များသည်အထူးသဖြင့်နိုင်ငံခြားသားများနှင့်ဘဏ္specialistsာရေးကျွမ်းကျင်သူများနှင့်ကျော်ကြားသည်။ Vanuatu တွင်အလုပ်လုပ်ခြင်းသည်၎င်း၏ကြီးမားသောအားသာချက်များကြောင့်လူသိများလာသည်နှင့်အမျှ Vanuatu ရှိကမ်းနားမြေသည်ရွေ့လျားစပြုနေပြီဖြစ်သည်။
စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းအများစုသည် Port Vila တွင်တည်ရှိပြီးငွေနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ဘဏ်လုပ်ငန်းသည်အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ Vanuatu မှတဆင့်ချွန်ထက်သောဘဏ္financeာရေးမန်နေဂျာအတွက်တံခါးများဖွင့်ထားပါသည်။ သင် ၀ ယ်ယူရန်ရရှိနိုင်သော Vanuatu စီးပွားရေးကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုပါကပြanနာမရှိပါ။ Vanuatu တွင်စီးပွားရေးလုပ်ခြင်း၏အားသာချက်များကိုကြည့်ပါ။
ဒါကြောင့် Vanuatu မှာအတူတကွအလုပ်လုပ်ခြင်း၏အားသာချက်များနှင့်အခက်အခဲများကဘာလဲ။
ကြောက်စရာကောင်းတဲ့တာဝန်ဥပဒေများ - ဗင်နူတူနိုင်ငံမှာအိမ်အသုံးစရိတ်နဲ့နီးစပ်မှုမရှိဘူး၊ ဤအချက်သည်ဗနူတူကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာအကန့်အသတ်များစွာရှိသောရုံးချုပ်ကိုရှာဖွေနေကြသောငွေကြေးမန်နေဂျာများအတွက်တံခါးဖွင့်ပေးသည်။ သူတို့ရရှိထားသည့်အဓိကတာဝန်မှာကုန်ပစ္စည်းများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အခွန် ၁၅% ဖြစ်ပြီး၊ ကုန်ကျစရိတ်များမမျှတဘဲဗနူတူမှအဖွဲ့အစည်းများအတွက်အတားအဆီးတစ်ခုမဟုတ်ပါ။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုအားတက်စေသည် - ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် Strata Titles အက်ဥပဒေကိုပြသခြင်းဖြင့်ဗင်နူတူအစိုးရသည်သူတို့၏တိုင်းပြည်အပေါ်မရင်းနှီးသောစိတ်ဝင်စားမှုကိုထိရောက်စွာပံ့ပိုးပေးသည်။ ဤအချက်ကသင်ကအမြဲတမ်းတောင့်တသောဗင်နူတူကမ်းရိုးတန်းရှိမြေယာပိုင်ဆိုင်မှုကိုပြောဆိုခြင်းသည်သင်ထင်ထားကောင်းထင်သည်ထက်လက်တွေ့ဖြစ်ရပ်မှန်ဖြစ်သည်။ အလားတူစွာစီးပွားရေးအမြင်အာရုံချို့တဲ့သူများသည်ဗနူအာတွင် ၀ ယ်ယူနိုင်သောအိမ်များကိုအမြတ်ထုတ်။ သူတို့၏လုပ်ငန်းအစုစုကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်။
၃။ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု - လွန်ခဲ့သောဆယ်နှစ်တာကာလအတွင်းဗနူတူစီးပွားရေးသည်အခြားဒေသများတွင်ကျော်ကြားခဲ့သည်။ ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ Vanuatu တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သောအရန်အပြောင်းအလဲများကြောင့်ကျွမ်းတဝင်မရှိသောဘဏ္specialistsာရေးကျွမ်းကျင်သူများသည် Vanuatu တွင်အတူတကွအလုပ်လုပ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်ပင်လယ်ရေကြောင်းဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုအပေါ်စီးပွားရေးမှီခိုနေရသော Vanuatu သည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ခိုင်မာသည့်တည်ထောင်ရန်ကမ်းလှမ်းထားသည်။
Vanuatu တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက် - ကျွန်ုပ်တို့သည် Vanuatu ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းအတွက်တစ်နေရာတည်းတွင် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူဖြစ်ပါသည်။ ဘဏ်စာရင်းဖွင့်ခြင်း Vanuatu၊ Vanuatu တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်ခြင်းနှင့် Vanuatu တွင် setup business သို့မဟုတ်ကမ္ဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံဖြစ်သည်။
Vanuatu ရှိ Company Incorporation ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည် Vanuatu ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းမှစီးပွားရေးအဖြေများကိုအစမှအဆုံးသတ်သည်။ Vanuatu ရှိ virtual office နှင့် Vanuatu ရှိ virtual office ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော HR ဖြေရှင်းချက်၊ Vanuatu ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ၀ ယ်ယူခြင်း၊ virtual နံပါတ် Vanuatu၊ Vanuatu တွင်စီးပွားရေးတိုးချဲ့ခြင်း၊ Vanuatu ရှိဥပဒေရေးရာ ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ Vanuatu ရှိဘဏ္consultာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ Vanuatu ရှိစီးပွားရေးဆိုင်ရာတန်ဖိုး၊ ကြောင့်စေ့စပ်သေချာစွာနှင့်လိုက်နာမှု, Vanuatu အတွက် Web ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတူသော Vanuatu အတွက်အိုင်တီဖြေရှင်းချက်, Vanuatu အတွက် Blockchain ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, Vanuatu အတွက်အီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, Vanuatu အတွက်အပလီကေးရှင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, Vanuatu အတွက် software ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, Vanuatu အတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး, တတ်နိုင်ခြင်းနှင့်ယှဉ်ပြိုင်စျေးနှုန်းအနည်းငယ်။
Vanuatu တွင်တည်ထောင်ပြီးသောကုမ္ပဏီများအတွက်: Vanuatu နှင့် Offshore ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် Vanuatu မှ offshore bank account အပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံတွင်အဆုံးမှအဆုံးအဖြေများကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Vanuatu ရှိသို့မဟုတ်နိုင်ငံတကာတွင်စိတ် ၀ င်စားသော HR ၀ န်ဆောင်မှုကိုအရည်အချင်းပြည့်ဝသော ၀ န်ထမ်းများငှားရမ်းရာတွင်ကူညီသည်။ Vanuatu ရှိစီးပွားရေးရောင်းအားနှင့် ၀ ယ်ခြင်း၊ Vanuatu တွင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Vanuatu ရှိ virtual နံပါတ်များ၊ Vanuatu တွင်နိုင်ငံတကာတိုးချဲ့ခြင်း၊ Vanuatu ရှိဥပဒေရေးရာ ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ Vanuatu ရှိစီးပွားရေးအတွက်စီးပွားရေးတန်ဖိုး၊ Vanuatu ရှိဘဏ္consultာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ Vanuatu ရှိ CRM Solutions, Merchant account နှင့် payment gateway Vanuatu တွင်ရှိသောပစ္စည်းကိရိယာငွေကြေးနှင့် Vanuatu တွင်လည်ပတ်ငွေကြေးအရင်းအနှီး၊ Vanuatu တွင်လုံ့လဝီရိယရှိရှိနှင့်လိုက်နာမှု၊ Vanuatu ရှိ Web development၊ Vanuatu ရှိ Web development, Vanuatu ရှိ Ecommerce Development၊ Vanuatu ရှိအက်ပလီကေးရှင်းများ၊ Vanuatu ရှိဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်၊ အလွန်ယှဉ်ပြိုင်မှုအနည်းဆုံးအမည်ပေးရန်ဗနူတူ၌ Blockchain ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စျေးနှုန်းများ။
Vanuatu ရှိ IBC အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကုန်ကျစရိတ်
Vanuatu အတွက်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ Vanuatu အတွက်စျေးအချိုဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဝန်ဆောင်မှုများ
“ Million Makers မှာကျွန်တော်တို့ဟာ Vanuatu နဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူတစ်ယောက်မှတောင်မှကမ်းလှမ်းတဲ့နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံမှာ ၀ န်ဆောင်မှုတွေအများကြီးပေးနေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာဖြေရှင်းချက်တွေကိုအဆုံးစွန်ပေးနေပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ဟာအကြီးမားဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေထဲကတစ်ယောက်လို့ပြောရင်မှန်တယ်။ ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကိုကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်။ စီးပွားရေးအတိုင်းအတာကြောင့်ဗနူတူ၌အကောင်းဆုံးသောစီးပွားရေးဖြေရှင်းချက်များကိုတတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းဖြင့်ပေးသည်။ WE Vanuatu အတွက်အဖြေတစ်ခုပေးသည်။
Vanuatu ရှိကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုကိုယ်စားလှယ်များနှင့် Vanuatu ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုစာရင်းကိုင်များကသင့်ကိုလမ်းပြလိမ့်မည်။
ဝန်ဆောင်ခ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း ဗာနူအာ (၁ နှစ်)
ဝန်ဆောင်ခ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ဗာနူအာ (နှစ် ၂ နှစ်)
အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်ခအတွက်ကျသင့်သည် ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း ဗာနူအာ
များအတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအခကြေးငွေ ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ဗာနူအာ
Vanuatu BUSINESS COMPANY အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများ ဝန်ဆောင်မှုကြေး
Merchant Account Vanuatu / ငွေပေးချေရမည့် Gateway Vanuatu
Vanuatu BUSINESS COMPANY အတွက်လျာထားသောဒါရိုက်တာ
Vanuatu ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီအတွက်အစုရှယ်ယာ ၀ န်ဆောင်မှုများ
Logo ကုမ္ပဏီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း Vanuatu
Vanuatu ရှိ Offshore ကုမ္ပဏီအတွက်ဒါရိုက်တာ / ရှယ်ယာရှင်ပြောင်းလဲမှု
Vanuatu Offshore ကုမ္ပဏီအတွက်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည့်အစုရှယ်ယာများတိုးပွားလာခြင်း
Vanuatu စီးပွားရေးကုမ္ပဏီအတွက်စာရွက်စာတမ်းများ Apostille
Vanuatu Offshore ကုမ္ပဏီအတွက်သံရုံးမှတရားဝင်
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီအတွက် Chop and Seal Vanuatu
Vanuatu ရှိ IBC အတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအခကြေးငွေ
● IBC Vanuatu အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်ခ (၁ နှစ်) - ဒေါ်လာ ၈၅၀
●ဗာနူးတူ၌ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းအတွက်အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်မှုခ - ဒေါ်လာ ၉၀၀
●အမည်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်း (ကျေးဇူးပြု၍ Vanuatu ရှိ Company TYPE3ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အခြားရွေးချယ်စရာအမည် ၃ ခုပေးပါ)
● IBC အတွက် Vanuatu တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများကိုသက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဖြင့်တင်သွင်းခြင်း
● Vanuatu ရှိ IBC အတွက်အစိုးရသက်ဆိုင်ရာအခကြေးငွေတစ်နှစ်ပေးဆောင်ခြင်း
● Vanuatu ရှိ IBC အတွက်မှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်နှင့်မှတ်ပုံတင်ထားသောလိပ်စာကိုတစ်နှစ်ပေးရမည်
● Vanuatu ရှိ IBC ကုမ္ပဏီကုမ္မဏီအတွင်းရေးမှူးကိုတစ်နှစ်ပေးအပ်ခြင်း
●ကျွန်ုပ်တိုသည် Vanuatu ရှိ IBC အတွက်စံသတ်မှတ်ထားသည့်ကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်အသင်း ၀ င်စာချွန်လွှာနှင့်အသင်း ၀ င်မှုများ၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အစုရှယ်ယာလက်မှတ်များ၊ ပထမဒါရိုက်တာများခန့်အပ်ခြင်း၊ ဒါရိုက်တာများနှင့်အသင်းဝင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။
Vanuatu တွင်စီးပွားရေးစတင်ရန်ဒေသတွင်းအရင်းအမြစ်များကိုသင်နှင့်နီးစပ်စေရန်အခမဲ့အကြံပေးသည်။ သင် Vanuatu သို့မဟုတ်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံတွင်စီးပွားရေးစတင်ချင်လျှင်အခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်သည်။
IBC Vanuatu အတွက်ကုန်သည်အကောင့်
Vanuatu ရှိ IBC ၏ဒါရိုက်တာအမည်ခံ
IBC Vanuatu အတွက်အစုရှယ်ယာ ၀ န်ဆောင်မှုများ
IBC Vanuatu အတွက်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည့်အစုရှယ်ယာများတိုးပွားလာခြင်း
ဘယ္လို ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ပါ Vanuatu မှာ Million Makers မှတဆင့်
အကယ်၍ သင်သည်ဗင်နူတူ၌ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုမှတ်ပုံတင်လိုပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ဗင်နူတူ၌ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ဗနူတူကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်အခြားတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များကိုမည်သို့မည်ပုံမှတ်ပုံတင်ရမည်ကိုရှင်းလင်းပြီးဘက်မလိုက်သောအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးလိမ့်မည်။ Vanuatu ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များသည် Vanuatu ရှိကုန်းတွင်းကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် Vanuatu ရှိ Offshore ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။ Vanuatu အပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံ၏နိုင်ငံတကာဘဏ်လုပ်ငန်းကွန်ယက်နှင့် Vanuatu ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအနေဖြင့်သင်၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောမိတ်ဆက်သူအနေဖြင့် Vanuatu တွင်ကော်ပိုရေးရှင်းဘဏ်စာရင်းများဖွင့်လှစ်ရန်ကူညီပေးပါမည်။ ငါတို့မှတစ်ဆင့်ဗနူတူး။ သင်သည်သင်၏ကုမ္ပဏီသည်ဗင်နူတူ၌ပါဝင်သည်။ သင်လျှောက်ထားလိုပါကဗင်နူတူနိုင်ငံသို့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာရရှိခဲ့သောသင်နှင့်သင်မိသားစုအတွက်ဗနူတူအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုအပြည့်အစုံလည်းကမ်းလှမ်းနိုင်သည်။ အဘို့ ဗနူအာနေအိမ်သို့ပါမစ်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ
Vanuatu ရှိကျွန်ုပ်တို့၏လူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကို Vanuatu ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်“ ၁ နာရီအခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေး” ပေးသည်။
Van Vanuatu အတွက်အလုပ်လုပ်ခွင့်
Van Vanuatu အတွက်နေထိုင်ခွင့်
Van Vanuatu အတွက်စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး
Van Vanuatu အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်နေထိုင်ခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့၏လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေနှင့်ဆက်သွယ်ပါ ဗာနူအာ ဥပဒေရေးရာအတွက် နေထိုင်ခွင့် ဗာနူအာ.
Vanuatu တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် Vanuatu ရှိ Company Incoporation နှင့် Vanuatu တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအကြောင်းသင်သိထားသင့်သမျှ
Vanuatu ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ Vanuatu ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းကိုင်များ၊ Vanuatu ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများနှင့်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စကို Vanuatu တွင်မြင့်မားသောလည်ပတ်မှုကြောင့် Vanuatu တွင်စျေးနှုန်းချိုသာသောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုအဖြေကိုသင်ပေးသည်။
IBC ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများ Vanuatu တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း - LLC Vanuatu တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း
Million Makers တွင်ကျွန်ုပ်တို့ ၀ န်ဆောင်မှုများစွာကို Vanuatu အပါအ ၀ င်ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူတစ် ဦး မှပင်ပေးအပ်ခြင်းမပြုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Vanuatu နှင့်နိုင်ငံပေါင်း (၁၀၆) နိုင်ငံတွင်စီးပွားရေးအဖြေရှာမှုများကိုအစမှအဆုံးသတ်စေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ယနေ့ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစီးပွားရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်သည်ဟုပြောလျှင်မှန်ကန်ပေလိမ့်မည်။ အတိုင်းအတာနှင့်အညီ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်“ Vanuatu ရှိအကောင်းဆုံးစီးပွားရေးနှင့်ကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများ” ကိုအသက်သာဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့်ပေးသည်။
WE Vanuatu အတွက်အဖြေတစ်ခုပေးသည်။
Vanuatu ရှိ IBC အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေခံ ၀ န်ဆောင်မှုတွင်အောက်ပါတို့ပါဝင်သည်။
Registry မှာ Vanuatu အတွက်ကုမ္ပဏီနာမည်ရှာပါ။
Vanuatu အတွက်ရှယ်ယာရှင်များ၊ ဒါရိုက်တာများနှင့်အသင်း ၀ င်များကိုမှတ်ပုံတင်ပါ။
Vanuatu ရှိ Vanuatu / LLC ရှိ IBC အတွက်အသင်း၏စာချွန်လွှာနှင့်စာတမ်းများ။
IBU အတွက် Vanuatu / LLC ရှိ IUC အတွက်အသိအမှတ်ပြုဝေစု၏လက်မှတ်စာအုပ်။
IUC အတွက်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်သည် Vanuatu တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသော Vanuatu / LLC တွင်မှတ်ပုံတင်ထားခြင်း။
မှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်။ Vanuatu ရှိ LLC ကိုဗနူတူ၌မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်လျှင်။
မှတ်ပုံတင်ရုံး, မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်ပါလျှင်, IBC Vanuatu / Vanuatu ရှိ LLC အတွက်။
IBU မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် Vanuatu / LLC တွင်မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ
မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်လိုအပ်သောကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများ Vanuatu ရှိ IBC / Vanuatu ရှိ LLC:
လိုင်စင်ရလှုပ်ရှားမှုများ: သငျသညျ Vanuatu အတွက်လိုအပ်သောလိုင်စင်မပါဘဲလှုပ်ရှားမှုသို့မဟုတ်သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များကခွင့်ပြုချက်ကို Vanuatu အတွက်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲလုပ်ဆောင်လျှင်, Million Makers မှာငါတို့လိုင်စင်မဲ့လှုပ်ရှားမှုနှင့်ဆက်စပ်သောဗာနွာ၌ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်န်ဆောင်မှုနှင့်အတူသင့်ကိုကူညီနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
လိုင်စင်ရလှုပ်ရှားမှုများဥပမာအနည်းငယ်ကစားခြင်း၊ လောင်းကစားခြင်း၊ ငွေကြေးဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများပေးနေခြင်း၊ ဗင်နူဝါ၌နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်ခြင်း၊ အရောင်းအ ၀ ယ်ခြင်း၊ ဗာနူးတူဘဏ်လုပ်ငန်း၊ Vanuatu ရှိအာမခံလုပ်ငန်း၊ ဘဏ္financialာရေးနှင့်ကုန်စည်အခြေခံဆင်းသက်လာသောတူရိယာများနှင့်ဗင်နူတူရှိအခြားအာမခံလုပ်ငန်းများ၊ Vanuatu တွင်ပစ္စည်းလဲလှယ်ခြင်း၊
Vanuatu ရှိ Crytocurrency လိုင်စင်ကိုလိုင်စင်ချပေးရန်လိုအပ်ပါက၊ Vanuatu ရှိ Forex အကျိုးဆောင်သို့မဟုတ်လောင်းကစားလိုင်စင်အတွက်အကူအညီလိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။
ဗာနူတူနှင့်ကုမ္ပဏီပေါင်း ၁၀၉ ခုအပါအ ၀ င်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိအမေရိကန် ၅၀ တွင်ကုမ္ပဏီများဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များ။
သန်းနှင့်ချီသောထုတ်လုပ်သူများ Vanuatu တွင်သာမကနိုင်ငံတကာဗဟုသုတများနှင့် Vanuatu ရှိ Professional CFA နှင့်ပေါင်းသင်းခြင်း၊ Vanuatu ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ Vanuatu ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းကိုင်များ၊ Vanuatu ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတိုင်ပင်ခံများမှတစ်ဆင့် Vanuatu တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Vanuatu ရှိကြီးမားသောအစုစုကို Vanuatu ရှိတစ် ဦး ချင်းအခွန်ပေးဆောင်သူများနှင့်နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုစီမံသည်။
Vanuatu တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် Vanuatu တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် Vanuatu ရှိကုမ္ပဏီများတည်ထောင်ခြင်းနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံတို့မှဖောက်သည်များကိုကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်။
Vanuatu ရှိ Corporate Services | Port Vila ရှိ Corporate Services
Vanuatu ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် Vanuatu ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် Vanuatu ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Vanuatu ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Vanuatu ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် Vanuatu ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်ဗင်နူဝါ၌ Offshore ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် Vanuatu ရှိကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများ, Vanuatu ရှိကော်ပိုရိတ် ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက် Vanuatu တွင်ကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် Vanuatu ကော်ပိုရေးရှင်းအတွက်အကြံပေး
Vanuatu ရှိလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ | Port Vila ရှိကုမ္ပဏီအတိုင်ပင်ခံ
Vanuatu နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံရှိကျွန်ုပ်တို့၏အထူးပြု ၀ န်ဆောင်မှုများ
Vanuatu တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ပြီးနောက် Vanuatu တွင်ကော်ပိုရိတ်ဘဏ်စာရင်းဖွင့်ပါ။
သင်၏ကုမ္ပဏီ Vanuatu တွင်မှတ်ပုံတင်ပြီးသည်နှင့်အွန်လိုင်းလျှောက်ထားပါ အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ကုန်သည်အကောင့် ဗာနူအာ.
Vanuatu ရှိ Accounts Outsourcing
သင်၏ကုမ္ပဏီသည်ဗင်နူတူးကုမ္ပဏီတွင်သင်ပါဝင်လုပ်ကိုင်ပြီးသင်အပြင်သို့သွားနိုင်သည် စာရင်းကိုင်လိုအပ်ချက်များကို Vanuatu ၌တည်၏။
ရှိပြီးသားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဝယ်ယူပါ Vanuatu တွင်ကုမ္ပဏီ၏ရှယ်ယာများဝယ်ခြင်းသို့မဟုတ် Vanuatu တွင်ကုမ္ပဏီ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ၀ ယ်ခြင်းအားဖြင့်။
HR အတိုင်ပင်ခံ ဗနူအာတွင်ပေးအပ်သည်မှာသင်၏ ၀ န်ထုပ် ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ၀ န်စုတွင် ၀ န်ထမ်းခေါ်ယူမှုကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
ကျနော်တို့ကိုထောကျပံ့ Vanuatu တွင်အဆင်သင့်ပြုလုပ်ထားသောကုမ္ပဏီ နှင့် Vanuatu နှင့် US အပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၇ နိုင်ငံ၊အသက်ကော်ပိုရေးရှင်းVanuatu ၌တည်၏
Vanuatu တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ပြီးနောက်သင်၌အခြားဝန်ဆောင်မှုများလိုအပ်သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ပါ ဗာနူအာ.
Vanuatu ရှိ cryptocurrency လိုင်စင်
သင်အကူအညီလိုအပ်ပါက cryptocurrency လိုင်စင် Vanuatu မှကမ်းလွန်သို့မဟုတ် EU တရားစီရင်မှုများအတွက်။
Vanuatu ရှိ CRM Solutions
CRM ဆော့ဝဲ Vanuatu ရှိအခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအပါအ ၀ င် Vanuatu ရှိသင့်ဖောက်သည်များ၏ဆက်သွယ်မှုနှင့်အထောက်အပံ့ကိုထိရောက်စွာထိန်းချုပ်ရန်ကူညီသည်။
Virtual Number - Vanuatu အတွက် VoIP
Virtual နံပါတ် Vanuatu ရှိစီးပွားရေး VoIP အပါအဝင် Vanuatu ရှိ VoIP ဖြေရှင်းချက်များ။ Vanuatu ရှိလူနေအိမ် VoIP ။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း လျှောက်လွှာ ၁ ခုသာရှိသောနိုင်ငံပေါင်း ၁၁၉ နိုင်ငံအတွက်ဗာနူတူမှဖြစ်သည်
ငါတို့အသင်း ဝဘ်ဆိုက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း ဗာနူအာ Vanuatu တွင်ထည့်သွင်းထားသောသင်၏ကုမ္ပဏီသစ်အတွက်လှပပြီးထူးခြားသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုဖန်တီးနိုင်သည်၊ $ 100 နှင့်အတူစတင်
Vanuatu ရှိ Software Development ကုမ္ပဏီ
ကျနော်တို့ကနိုင်ငံတကာပေး Web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဗာနူအာ, Vanuatu ရှိ CryptoCurrency software ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် Vanuatu ရှိ app ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။
စျေးနှုန်းချိုသာသောဆော့ဝဲလ်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ Vanuatu | Vanuatu ရှိစျေးသက်သာသောစီးပွားကူးသန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
အမြတ်အစွန်းမြင့်မားသောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများပိုင်ရှင်များ၊ ကြီးမားသောကော်ပိုရေးရှင်းများနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် Vanuatu တွင်မြန်ဆန်သောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုကိုထောက်ခံရန်နှင့်၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ တိကျသောလမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အစိုးရစည်းမျဉ်းများနှင့် Vanuatu တို့ပါ ၀ င်သောတိကျသောဖြစ်စဉ်များကိုလျင်မြန်စွာလိုက်နာရန်ရှာဖွေနေသည်။ Vanuatu ရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့မဟုတ်ဖောက်သည်၏ကြိုက်နှစ်သက်သောကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနေရာ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံများကြွယ်ဝသောကြောင့်ဖြစ်နိုင်သောအရာများနှင့်သူတို့ကိုမကူညီနိုင်သည့်အရာများအကြောင်းရိုးသားစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များသည်သူတို့ကုမ္ပဏီအားဗင်နူတူ၌မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယုံကြည်ကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Vanuatu တွင်နေထိုင်သူများနှင့် Vanuatu တွင် IBC ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အတူနိုင်ငံခြားသားများကိုထောက်ခံသည်။ Vanuatu ရှိ IBC Registration, Vanuatu တွင် IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Vanuatu ရှိ IBC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Vanuatu ရှိ IBC မှတ်ပုံတင်၊ Vanuatu တွင် Offshore IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း။ , Vanuatu IBC ဖွဲ့စည်းခြင်း, Vanuatu IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း, Vanuatu IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း, Vanuatu ကမ်းလွန် IBC ဖွဲ့စည်းခြင်း, Vanuatu ကမ်းလွန် IBC မှတ်ပုံတင်။
Vanuatu တွင် IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ပံ့ပိုးမှု ဗနူအာတွင် LLC တည်ထောင်ခြင်း ဗနူတူ၌နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း | Vanuatu တွင်ကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း ဗနူတူ၌နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း | Vanuatu တွင် IC ပါဝင်မှု | LLC ကုမ္ပဏီ Vanuatu တွင်မှတ်ပုံတင် Iuu ကုမ္ဗဏီသည် Vanuatu တွင်ပါဝင်သည် Vanuatu တွင်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့သည် Vanuatu တွင်နေထိုင်သူများနှင့် Vanuatu တွင် LLC ဖွဲ့စည်းမှုရှိသောနိုင်ငံခြားသားများအားလည်း Vanuatu တွင် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ LLC ကို Vanuatu တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Vanuatu တွင်ရှိသော Offshore LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Vanuatu တွင် Offshore LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Vanuatu တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ , Vanuatu LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း, Vanuatu LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း, Vanuatu LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း, Vanuatu ကမ်းလွန် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း, Vanuatu ကမ်းလွန် LLC မှတ်ပုံတင်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Vanuatu ရှိနေထိုင်သူများနှင့်နိုင်ငံခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို Vanuatu တွင် International Business Company ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်နိုင်ငံခြားသားများကိုထောက်ခံသည်။ Vanuatu တွင် International Business Company Registration, Vanuatu တွင် International Business Company တည်ထောင်ခြင်း၊ Vanuatu ရှိ Offshore International Business Company ဖွဲ့စည်းခြင်း, Offshore International Business Company Registration Vanuatu အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Vanuatu အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း, Vanuatu အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း, Vanuatu ကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း, Vanuatu ကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Vanuatu တွင်နေထိုင်သူများနှင့် Vanuatu ရှိ Offshore Business Company ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောနိုင်ငံခြားသားများကို Vanuatu ရှိ Offshore Business Company Registration, Vanuatu တွင်ရှိသော Offshore Business Company မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Vanuatu ရှိ Offshore Offshore Business Company ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Offshore Offshore Offshore Business Company မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Vanuatu, Offshore Offshore Business Company ဖွဲ့စည်းခြင်း Vanuatu တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Vanuatu ကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Vanuatu ကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း, Vanuatu ကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း, Vanuatu ကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း, ဗာနူးကမ်းလွန်ကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Vanuatu တွင်နေထိုင်သူများနှင့်နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများအား Vanuatu တွင်နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Vanuatu တွင်နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Vanuatu တွင် International Company မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Vanuatu ရှိ Offshore International Company ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် Vanuatu ရှိ Offshore International Company မှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ Vanuatu အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Vanuatu International ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Vanuatu အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း, Vanuatu ကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း, Vanuatu ကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Vanuatu တွင်နေထိုင်သူများနှင့် Vanuatu တွင် IC ဖွဲ့စည်းခြင်းရှိသောနိုင်ငံခြားသားများကိုလည်း Vanuatu တွင် IC Registration, Vanuatu တွင် IC ပေါင်းစပ်ခြင်း၊ Vanuatu တွင် Offshore IC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Vanuatu တွင် Offshore IC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Vanuatu တွင် Offshore IC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ , Vanuatu IC ဖွဲ့စည်းခြင်း, Vanuatu IC Registration, Vanuatu IC ပေါင်းစပ်ခြင်း, Vanuatu ကမ်းလွန် IC ဖွဲ့စည်းခြင်း, Vanuatu ကမ်းလွန် IC မှတ်ပုံတင်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Vanuatu တွင်နေထိုင်သူများနှင့် Vanuatu တွင် LLC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အတူနိုင်ငံခြားသားများကိုထောက်ခံသည်။ Vanuatu တွင် LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Vanuatu တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Vanuatu တွင် Offshore LLC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Vanuatu တွင် Offshore LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Vanuatu LLC တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Vanuatu LLC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Vanuatu LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း, Vanuatu LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း, Vanuatu ကမ်းလွန် LLC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း, Vanuatu ကမ်းလွန် LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Vanuatu တွင်နေထိုင်သူများနှင့် Vanuatu ရှိ IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အတူနိုင်ငံခြားသားများကိုထောက်ခံသည်။ Vanuatu တွင် IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Vanuatu ရှိ IBC Company တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Vanuatu ရှိ IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Vanuatu ရှိ IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Vanuatu တွင် IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Vanuatu IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Vanuatu IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း, Vanuatu IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း, Vanuatu ကမ်းလွန် IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း, Vanuatu ကမ်းလွန် IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Vanuatu တွင်နေထိုင်သူများနှင့် Vanuatu ရှိစီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ပါ ၀ င်သောနိုင်ငံခြားသားများအား Vanuatu တွင်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Vanuatu တွင်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ Vanuatu ရှိ Offshore Business Company ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Vanuatu ရှိ Offshore Business Company မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Vanuatu စီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Vanuatu စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Vanuatu စီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Vanuatu ကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Vanuatu ကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
IBC ကို Vanuatu တွင်မှတ်ပုံတင်ပါ LLC ကို Vanuatu တွင်မှတ်ပုံတင်ပါ နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီ Vanuatu တွင်မှတ်ပုံတင်ပါ Vanuatu တွင်ရှိသောကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ပါ Vanuatu တွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ရန် IC ကို Vanuatu တွင်မှတ်ပုံတင်ပါ LLC ကုမ္ပဏီကို Vanuatu တွင်မှတ်ပုံတင်ပါ Iuu ကုမ္ပဏီကို Vanuatu တွင်မှတ်ပုံတင်ပါ Vanuatu တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ပါ
မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ - Vanuatu တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်ကုမ္ပဏီများအား Vanuatu တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Vanuatu တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Vanuatu တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။ Vanuatu မှ Offshore ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Vanuatu မှ Offshore Company Registration၊ Vanuatu မှ Offshore ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။ Vanuatu တွင်အထောက်အပံ့များမှာ - Port Vila တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Port Vila တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Port Vila မှ Offshore ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Port Vila မှ Offshore ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Port Vila မှ Offshore ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
Vanuatu တွင်စျေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း Port Vila တွင်စျေးအချိုဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
Vanuatu ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းသည် Vanuatu ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၏ထောက်ခံမှုဖြင့် Vanuatu ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့် Vanuatu ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်သည့်ကိုယ်စားလှယ်များမှအောင်မြင်စွာပြီးမြောက်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ပါမြို့ကြီးများမှ Port Vila ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းသည့်အေးဂျင့်များအတွက်ထောက်ပံ့သည်။ Port Vila၊ Port Vila ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ Port Vila ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုကိုယ်စားလှယ်များ၊ Port Vila ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ Port Vila ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ။
Vanuatu တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအေးဂျင့်များ Port Vila ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ
သငျသညျ Vanuatu အတွက်တတ်နိုင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းန်ဆောင်မှုပေးပါသလား
ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်တော်တို့ ၀ န်ဆောင်မှုပေးနေတယ်ဆိုတာ Vanuatu မှာစျေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှု ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးနေတယ်၊ ​​Vanuatu မှာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုတွေ၊ Vanuatu မှာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့် Vanuatu ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးအပ်ခြင်း၊ Port Vila မှာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီများဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ထောက်ခံပါတယ်။ Port Vila တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ Port Vila ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ Port Vila ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု, Port Vila ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု, Port Vila ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု။
Vanuatu တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း Port Vila တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
Vanuatu တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန် ၀ န်ဆောင်မှုများပေးပါသလား။
Vanuatu တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်၊ Vanuatu တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်ရန်၊ Vanuatu တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်၊ Vanuatu တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်၊ Vanuatu တွင် setup ကုမ္ပဏီ၊ Vanuatu တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်၊ Vanuatu တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်၊ Port Vila တွင် Port Vila တွင်မှတ်ပုံတင်ပါ။ Port Vila တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်ပါ။ Port Vila တွင် Setup ကုမ္ပဏီထည့်ပါ။ Port Vila တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ပါ။ Port Vila တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်ပါ။
Vanuatu တွင်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများ Port Vila တွင်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှု
Vanuatu တွင်နေထိုင်သူမဟုတ်သူများကိုကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Vanuatu တွင်နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Vanuatu တွင်ဘဏ်စာရင်းရှိနိုင်ငံခြားသားကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအပါအ ၀ င်နိုင်ငံခြားသားအားမြို့တော်၌လည်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Port Vila တွင်နေထိုင်သူများမဟုတ်သည့်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအပါအ ၀ င်နိုင်ငံခြားသားအားဗင်နူတီ၌မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ , Port Vila ရှိနိုင်ငံခြားသားအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်, ဘဏ်အကောင့်နှင့်အတူနိုင်ငံခြားသားများအတွက် Port Vila အတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်။
ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ Vanuatu | ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု Port Vila
ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကုန်ကျစရိတ် Vanuatu တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကုန်ကျစရိတ် Vanuatu တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကုန်ကျစရိတ် Vanuatu တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအခကြေးငွေ Vanuatu တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအခကြေးငွေ Vanuatu တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကုန်ကျစရိတ် Vanuatu တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကုန်ကျမှု Vanuatu တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကုန်ကျကုမ္မဏီတည်ထောင်ကုန်ကျစရိတ် Vanuatu ကုမ္ပဏီ ဖွဲ့စည်းခြင်းကုန်ကျစရိတ် Vanuatu တွင်ကုမ္ပဏီကုန်ကျသည် Vanuatu တွင်ကုန်ကျသည်။
စျေးနှုန်းချိုသာသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေး။ Vanuatu | Port Vila ရှိစျေးသက်သာသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေး
ကျွန်ုပ်သည် Vanuatu တွင်နိုင်ငံခြားကုမ္မဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန် (သို့) Vanuatu တွင်နိုင်ငံခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုမည်သို့ထည့်သွင်းရမည်နည်း။
Vanuatu တွင်နိုင်ငံခြားစီးပွားရေးစတင်ရန် (သို့မဟုတ်) Vanuatu တွင်နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ် Vanuatu တွင်နိုင်ငံခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုတည်ထောင်ရန်အတွက် Vanuatu တွင်လိုအပ်သောလိုအပ်ချက်အချို့ရှိသည်။ ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ
Vanuatu တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုထည့်သွင်းပါ Port Vila တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုထည့်သွင်းပါ
ဗင်နူဝါး၌ IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်းတွင်သင်အထောက်အကူပြုနိုင်ပါသလား Vanuatu တွင် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဗနူအာ၌နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း Vanuatu ရှိကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း Vanuatu တွင်နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း Vanuatu တွင် IC မှတ်ပုံတင်ခြင်း LLC ဗနူတူ၌ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ဗနူတူ၌ IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း Vanuatu တွင်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
IBC ကို Vanuatu တွင်ထည့်သွင်းပါ Incorporate LLC Vanuatu | Vanuatu ရှိအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီကြီး Vanuatu ရှိ Offshore Business Company ကိုထည့်သွင်းပါ Vanuatu တွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ပါ IC ကို Vanuatu တွင်ထည့်သွင်းပါ Incuate LLC ကုမ္ပဏီ Vanuatu | Vanuatu တွင် IBC ကုမ္ပဏီကိုထည့်သွင်းပါ Vanuatu ရှိစီးပွားရေးကုမ္ပဏီကိုထည့်သွင်းပါ
Vanuatu တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် Vanuatu တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအကြားမည်သို့ခြားနားသနည်း။
Vanuatu တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း (သို့မဟုတ်) Vanuatu တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း (သို့မဟုတ်) Vanuatu တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့ကွဲပြားခြားနားခြင်းမရှိဟုသုံးစွဲသူများစွာမေးလေ့ရှိသောဤအခြေခံမေးခွန်းကိုဖြေဆိုရန်အတွက်၎င်းတို့သည် Vanuatu တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုပါဝင်သောကုမ္ပဏီအတွက်အသုံးပြုသောစကားလုံးအမျိုးမျိုးဖြစ်သည်။
Vanuatu ရှိထိပ်တန်းကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းစု ၀ န်ဆောင်မှုများ Vanuatu ရှိထိပ်တန်းကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု Vanuatu တွင်ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ
သင်၏ကုမ္ပဏီကုမ္မဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုဗနူတူး၌အဘယ်ကြောင့်သို့မဟုတ်ဗင်နူတူ၌ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုအဘယ်ကြောင့်သုံးရမည်နည်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Vanuatu ရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ခြင်းအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုထူးချွန်မှုများစွာကိုထိန်းသိမ်းထားပြီး၊ ဗင်နူတူ၌ကုမ္ပဏီ၏မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အရည်အသွေးမြင့်မားခြင်းနှင့်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များကြောင့်လူသိများသောအရည်အသွေးကောင်းမွန်သောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းစာရင်းကိုင်များအနေဖြင့် Vanuatu ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးနှုန်းထားများကိုကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီမှပေးသည်။ Vanuatu တွင် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့် Vanuatu ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတိုင်ပင်ခံ။
Vanuatu ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်စျေးသက်သာစာရင်းကိုင်များ Vanuatu ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်စျေးသက်သာစာရင်းကိုင်များ Vanuatu တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်အတွက်တတ်နိုင်စာရင်းကိုင်များ
နေထိုင်သူမဟုတ်သူများနှင့်နိုင်ငံခြားသားများအတွက်ဗနူအာတွင်အထူး ၀ န်ဆောင်မှုများ
Port Vila တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအပါအဝင် Vanuatu တွင်နေထိုင်သူမဟုတ်သူများနှင့်နိုင်ငံခြားသားအားကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အထူးထောက်ပံ့သည်။ သင်ဟာနိုင်ငံခြားသားတ ဦး ဖြစ်ပြီး Vanuatu မှာကုမ္ပဏီဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင်၊
Vanuatu တွင်နေထိုင်သူမဟုတ်သူများအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် Vanuatu ရှိနိုင်ငံခြားသားအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း။
ယနေ့ Vanuatu တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုထည့်သွင်းပါ
Vanuatu တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ Vanuatu တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုမှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ် Vanuatu တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ် Vanuatu တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများလိုအပ်ပါကသို့မဟုတ် Vanuatu တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်ရန် Vanuatu တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ အလားတူ Vanuatu တွင်လည်း Port Vila တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်ရန်၊ Port Vila တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ် Port Vila တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုထည့်ရန်သို့မဟုတ် Port Vila တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ် Port Vila တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်ရန်၊ Port ရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန် Vila, Port Vila အတွက်ကုမ္ပဏီတစ်ခု setup ။
Vanuatu တွင်စျေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု Port Vila တွင်ကုန်ကျစရိတ်အသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း
Destination Vanuatu ခရီးသွားနှင့် Gu ည့်လမ်းညွှန်များ
Vanuatu AZ itors ည့်လမ်းညွှန်
Jane's Vanuatu ပင်မစာမျက်နှာ
Vanuatu Daily Post ကို, Port Vila
Vanuatu နေ့စဉ် Digest မဂ္ဂဇင်း
ဗာနူးတူသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သိပ္ပံ Society က
ဘီဘီစီနိုင်ငံ၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အကျဉ်း - ဗနူတူ
Open Directory စီမံကိန်း - ဗနူတူ
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ - ဗနူတူ
အမွေအနှစ်ဖောင်ဒေးရှင်း - ဗာနူးတူ
လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ - ဗနူတူ
ကမ္ဘာ့ဖြစ်ရပ်မှန်စာအုပ် - ဗနူတူ
ဘဏ္Pာရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ BANK LIMITED
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ '' ယုံကြည်မှု LIMITED
ပစိဖိတ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာယုံကြည်မှု CO ။ , LTD
VANUATU ၏ Reserve Bank
PACIFIC LIMITED ၏ UNITED DEVELOPMENT BANK
မှတ်စု * ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်ဗနူးတူ၌ငွေကြေးခဝါချခြင်း၊ မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှု၊ အကြမ်းဖက်မှုနှင့်လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးကိုလုံးဝဆန့်ကျင်သည်။ ထို့ကြောင့်ဤကဲ့သို့သောလူများကိုကျွန်ုပ်တို့မထောက်ခံပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ပံ့ပိုးခြင်းသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ ဗာနူအာ အောက်ဖော်ပြပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများသို့:
●ဗန်နူးတူကုမ္ပဏီအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုကုန်သည်များ၊ ဖြန့်ဖြူးသူ၊ လက်နက်များ၊ လက်နက်များ၊ ခဲယမ်းမီးကျောက်များ၊
●ဗန်နူးတူကုမ္ပဏီအတွက်ကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းရေး ၀ န်ဆောင်မှုကိုနည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း၊ ပစ္စည်းခိုးယူခြင်းသို့မဟုတ်ဗင်နူတူသို့ (သို့) မှသို့မဟုတ်မှစက်မှုလုပ်ငန်းသူလျှိုများအတွက်ထောက်ပံ့ပေးခြင်းမရှိပါ။
●ဗာနူးတူကုမ္ပဏီအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုတရားမ ၀ င်သောသို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်လူနူလူမည်းတွေအားလုံးကိုဗန်နူတူဥပဒေအောက်မှာမပေးပါဘူး။
●ဗန်နူတူအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုတစ် ဦး ချင်းစီသို့ဖြစ်စေ၊ ဗင်နူတူမှဖြစ်စေ၊ သို့ဖြစ်စေမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်သောကုမ္ပဏီများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
●ဗန်နူတူကုမ္ပဏီအတွက်ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောဇီဝဗေဒဆိုင်ရာနှင့် ၀ န်ဗူးatuကုမ္ပဏီများမှဖြစ်စေ၊ ကုမ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပွာွာန်ဒါများမှထုတ်လုပ်သောစက်များသို့မဟုတ်စက်ပစ္စည်းများအပါအ ၀ င်၊ ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ကိုင်တွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ထုတ်ခြင်း။
●ဗင်နူတူအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုလူ၊ တိရစ္ဆာန်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများကုန်သွယ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ တိရိစ္ဆာန်များအလွဲသုံးစားပြုခြင်းသို့မဟုတ်သိပ္ပံနည်းကျသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်စမ်းသပ်မှုအတွက်တိရိစ္ဆာန်များအသုံးပြုခြင်းကိုဖြစ်စေ၊
●အငှားမိဘအုပ်ထိန်းမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ (သို့) ဗာနူးတူ (သို့) ဗာနူးတူသို့လူ့အခွင့်အရေးအလွဲသုံးစားမှုအပါအ ၀ င်မွေးစားအေဂျင်စီများအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုမပေးဘူး။
●ဗာနူးတူကုမ္ပဏီအတွက်ကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုဘာသာရေးထုံးတမ်းများနှင့်သူတို့၏ကုသိုလ်ဖြစ်ကုမ္မဏီများအတွက်ဗနူတူသို့သို့မဟုတ်မှသို့မဟုတ်သို့မသွားပါ။
●ဗန်နူတူအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအခြေခံသောဗာနူးတူတစ် ဦး ချင်းသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးသည်။
●ပိရမစ်ရောင်းဝယ်မှုတွင်ပါဝင်သောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ဗနူတူအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုမပေးပါဘူး။
●ဗာနူးတူအတွက်ကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများသည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆိုင်သောပစ္စည်းပစ္စယများကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေသည့်သို့မဟုတ်မှဗနူတူသို့သို့မဟုတ်သို့ ၀ င်သို့တစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
"အရေးကြီးသတိပြုပါ : Million Makers သည်ကုမ္ပဏီတွင်ပါ ၀ င်မှုအတွက်သတင်းအချက်အလက်များကိုသုတေသနပြုခြင်းနှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာဂရုစိုက်ခဲ့သည် ဗာနူအာတစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်း၏သတင်းအချက်အလက် (သို့) ၀ န်ဆောင်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဘဏ္financialာရေးဆိုင်ရာသို့မဟုတ်အခြားဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ပျက်စီးခြင်းအတွက်မည်သည့်တာ ၀ န်ကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့လက်မခံပါ။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုသူများသည်မိမိကိုယ်တိုင်ပါ ၀ င်မှုမပြုမီသင့်လျော်သောကျွမ်းကျင်သောအကြံဥာဏ်များရယူရန်အကြံပေးသည် ဗာနူအာ, ဗာနူအာ ဘဏ်အကောင့်, ဗာနူအာ ယုံကြည်မှု ဗာနူအာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ပေးအခြားမည်သည့်ဝန်ဆောင်မှု ဗာနူအာ။ "
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လမ်းညွှန် နှင့် ထောက်ပံ့ ဗနူအာ
အသုံးပြုသူသည် https://www.millionmakers.com/company-formation/company-formation-vanuatu/ တွင်ပုံစံကိုဖြည့်စွက်ထားသည်။
သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိဆိုက်ကပ်စာမျက်နှာ - https://www.millionmakers.com/company-formation/company-formation-vanuatu/